FJKM Tranovato Ambatonakanga : hanolotra ny « Ny fitiavan-dRay » ny Lehilahy Midera | NewsMada
FJKM Tranovato Ambatonakanga : hanolotra ny « Ny fitiavan-dRay » ny Lehilahy Midera
Tafiditra ao anatin’ny faha-150 taon’ny Tranovato Ambatonakanga. Andiany fahatelo ny seho ataon’ny Lehilahy Midera. Hitondra ny lohateny « Ny fitiavan-dRay » ity fampisehoana hotanterahina ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, ny alahady 18 jona ity. Mifanojo rahateo amin’ny fanamarihana ny fetin’ny ray izao fanolorana fisaorana sy fiderana ny Tompo Ray mpahary, izao rehetra izao.
Mpihira 20 eo ho eo no hanandratra ny « Fitiavan-dRay » izay handrenesana hira 15 ka ny 7 amin’ireo noforonin’ny mpikambana avy ao amin’ny Lehilahy Midera. Anisan’ireny ny « Arovinao » (Francis Raharison). Hira noforonina voalohany tao amin’ny SLK Ambatonakanga, « Mpanota ô mihevera » (David Ramasindraibe,), « Mila Fanasina » (Dylan Lantoniaina. Hira Fanevan’ny faha-150 taon’ny « Tranovato Ambatonakanga).
Fizaram-potoana faharoa handrenesana ireo hira anglisy sy amerikana nadikan’ny Lehilahy Midera amin’ny fiteny malagasy. Toy ny « Notendreny aho » (He touched me, Bill Gaither 1963), « Mamy ny matoky Azy » (‘Tis so sweet to trust in Jesus, Louisa M.R. Stead 1882), « Hampijoro ahy » (You raise me up, Brendan Graham 2002), « Ny halalin’ny Fitiavan-dRay » (How deep the Father’s love for us, Stuart C. Townend 2013) …
Hanankinana ity fotoana ity ny Soratra Masina ao amin’ny bokin’i Jeremia 31:3b « Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ».